Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 4
Nandritra ny fanangonana hariva dia lasa ny fanontaniana nanontany: Moa ny teôlôpista ve ny mpihinam-bary na mpihinana hena?
Ny teôzôsistika dia mety mihinana hena na biby fihinana, fa ny vegetarianisme na ny fihinana hena dia tsy hahatonga ny olona iray ho theosophist. Mampalahelo fa maro no mihevitra fa ny sine qua non ho amin'ny fiainana ara-panahy dia vegetarianism, fa ny fanambarana toy izany dia mifanohitra amin'ny fampianaran'ny mpampianatra ara-panahy marina. “Tsy izay aloaky ny vava no mandoto ny olona, ​​fa izay mivoaka avy amin'ny vava no mahaloto ny olona izany”, hoy i Jesosy. (Matt.xvii.)
'Aza mino ny hipetrahana ao amin'ny ala maizina, amin'ny toerana mangingina tsy misy olona; aza mino ny fiainana amin'ny faka sy ny zavamaniry. . . . Ry mpanolotsaina, hitarika anao amin'ny tanjona amin'ny fanafahana farany ity, "hoy ny Feon'ny fahanginana. Ny teôlôfista dia tokony hampiasa ny fahaizany mandanjalanja tsara indrindra ary hofehezin'ny saina foana amin'ny fikarakarana ny fahasalamany ara-batana sy ara-tsaina. Mikasika ny resaka sakafo dia ny fanontaniana voalohany tokony hapetrany amin'ny tenany dia ny hoe "Inona no sakafo ilaina hataoko mba hitazomana ny vatako ho salama?" Rehefa hitany izany tamin'ny alàlan'ny fanandramana dia avelao izy handray ilay sakafo izay asehon'ny zavatra niainany sy ny fandinihany azy fa mifanaraka tsara amin'ny zavatra takiny ara-batana sy ara-tsaina. Avy eo dia tsy hisalasala izy ny amin'ny sakafo hohaniny, fa azo antoka fa tsy hiteny na hieritreritra meatariasm na legioma momba ny legioma izy satria mahafeno fepetra ho an'ny theosophist.
Ahoana no ahafahan'ny tena teosophista mihevi-tena ho mpahay teôlôpista ary mbola mihinana hena rehefa fantatsika fa ny fanirian'ny biby dia nafindra avy amin'ny nofon'ny biby ho an'ny vatan'ny olona mihinana azy?
Ny tena theosophist dia tsy mitonona ho teosofista mihitsy. Maro ny mpikambana ao amin'ny Theosophical Society fa vitsy ny tena theosophists; satria ny theosophist dia, araka ny dikan'ny anarany, izay nahatratra ny fahendren'Andriamanitra; izay efa tafaray amin’Andriamaniny. Rehefa miresaka momba ny teôlôfista tena izy isika dia tokony hidika ho manana fahendrena avy amin'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny, na dia tsy marina aza, raha miteny, na izany aza, ny theosophist dia mpikambana ao amin'ny Fikambanana Theosophical. Ilay milaza fa fantany ny filan'ny biby hafindra ao amin'ny vatan'ny olona mihinana azy dia manaporofo amin'ny filazany fa tsy fantany. Ny nofon'ny biby no endrika tena mivoatra sy mivondrona indrindra izay azo ampiasaina ho sakafo. Izany dia maneho faniriana, azo antoka, fa ny fanirian'ny biby amin'ny toetrany voajanahary dia tsy dia mampidi-doza kokoa noho ny faniriana ao amin'ny olombelona. Ny faniriana samirery dia tsy ratsy fa manjary lasa ratsy fanahy kosa rehefa mirona saina ratsy fanahy. Tsy ny faniriana akory no ratsy, fa ny tanjona ratsy apetraky ny saina ary izay mety hanetsika ny saina, fa ny filazan'ny hetahetan'ny biby ho entity dia nafindra ho an'ny vatan'olombelona dia fanambarana diso. Tsy misy ifandraisany amin’ny henan’io biby io mihitsy ilay zavatra antsoina hoe kama rupa, na vatana faniriana, izay manetsika ny vatan’ilay biby. Ny fanirian'ny biby dia miaina amin'ny ran'ny biby. Rehefa vonoina ilay biby, dia mivoaka avy ao amin'ny vatany ara-nofo ny vatana-maniry miaraka amin'ny ràn'aina, ka mamela ny nofo, voaforon'ny sela, ho endrika aina mivondrona izay novolavolain'io biby io avy amin'ny fanjakan'ny anana. Ilay mpihinana hena dia mety manana ny zony hiteny, ary mandanjalanja kokoa raha nilaza izy fa nanapoizina ny tenany tamin'ny asidra prussic ilay vegetarianana tamin'ny fihinanana salady na amin'ireo poizina hafa izay be legioma, noho izay azon'ny mpihinan-kena atao. Lazao tsara fa nihinana sy nitaona ny fanirian’ny biby ilay mpihinana hena.
Tsy marina ve fa miaina legioma ny yogis ao India, ary ireo olon'ny zava-bitany, ary raha izany, tsy tokony ho an'ireo izay te hivoatra amin'ny hena sy miaina legioma koa ve izany?
Marina fa ny ankamaroan'ny yogis dia tsy mihinana hena, na koa ireo manana fahatsarana lehibe ara-panahy, ary izay miaina ivelan'ny olombelona, ​​fa tsy manaraka izany satria izy ireo dia tokony tsy hihinan-kena ny hafa. Ireo lehilahy ireo dia tsy nahazo tombony ara-panahy satria miaina amin'ny legioma, fa mihinana legioma izy ireo satria afaka manao tsy misy ny herin'ny hena. Tokony hitadidintsika indray fa ny olona efa tratra dia tsy mitovy amin'ny olona miezaka ny hahatongavana ary ny sakafon'ny iray dia tsy mety ho sakafon'ny hafa satria ny tsirairay avy dia mitaky ny sakafo ilaina indrindra amin'izany mba hitazomana ny fahasalamana. Mampientanentana tokoa ny mampientanentana ny fahitana fa amin'izao fotoana izao ny idealy iray dia tsikaritra ilay mahita fa toa azo heverina fa tsy mahavita azy izany. Tahaka ny ankizy mahita zavatra lavitra isika, nefa tsy mahalala ny hahatongavan'ny elanelan-tany. Ratsy loatra izany fa ny olona manana tsirambina ny yogiship na ny maha-Andriamanitra dia tsy tokony hanahaka ny toetran'Andriamanitra sy ny fahitana ara-panahin'ireo lehilahy masina fa tsy ny fahazarana sy fombafomba ara-batana sy ara-batana indrindra indrindra, ary mieritreritra fa amin'ny fanaovana izany dia ho lasa masina koa . Ny iray amin'ireo zavatra ilaina amin'ny fivoarana ara-panahy dia ny mianatra ny antsoin'i Carlyle hoe "The Fitness Fitness amin'ny Zavatra Mandrakizay."
Inona no fiantraikan'ny fihinanana legioma amin'ny vatana, raha oharina amin'ny fihinanana hena?
Izany dia tena tapa-kevitra amin'ny fitaovana fandevonan-kanina. Ny fandevonan-kanina dia tanterahana eo am-bavan'ny vavany, ny vavony ary ny tsinay. Ny legioma dia mihady ao amin'ny lakandrano tsinay, fa ny kibo kosa matetika misy taovam-pandevonan-kena. Ny sakafo nalaina ao am-bava dia misy masticated ary afangaro amin'ny ranoka, ny nify manondro ny fironana voajanahary sy ny kalitaon'ny vatana ho azy amin'ny zavamaniry maloto na karnivorous. Ny nify dia mampiseho fa ny olombelona dia voan'ny carnivorous roa ampahatelony ary ny ampahatelony dia ahavona, izay midika fa ny voajanahary dia nanome azy ny roa ampahatelon'ny isan'ny nifiny hihinana hena ary iray ampahatelon'ny hena. Amin'ny vatana ara-pahasalamana voajanahary dia tokony io ny mizana amin'ny sakafony. Amin'ny toe-pahasalamana mahasalama ny fampiasana karazana iray ho fanesorana ny iray hafa dia miteraka tsy fahampiana amin'ny tsy fahasalamana. Ny fampiasana legioma tokana dia miteraka fermentation sy famokarana masirasira ao amin'ny vatana, izay mitondra aretina amin'ny olombelona rehetra. Raha vantany vao manomboka ny fermentation amin'ny vavony sy ny tsinainy dia misy masirasira misy ao anaty ra ary lasa tsy mihetsika ny saina. Ny gazy karbonika asidra izay amboarina dia misy fiantraikany ao am-po, ary mihetsika amin'ny nerveo ka mahatonga ny fanafihana ny paralysis na aretina hafa mikorontana sy hozatra. Anisan'ireo famantarana sy porofon'ny zavamaniry vegetarianisma dia tsy mora tohina, malahelo, mikorontana mikoton-tena, fihenan'ny fo, tohina ny fo, tsy fitohizan'ny fisainana sy fifantohan'ny saina, fanapotehana ny fahasalaman'ny matanjaka, fihenan'ny vatan'ny vatana, ary fironana ho mediumship. Ny fihinanana hena dia manome hery ny vatana amin'ny hery voajanahary izay takiana. Izy io dia mahatonga ny vatana ho biby matanjaka, salama, ara-batana, ary manangana io vatan'olombelona io ho fiarovana mafy ao aorian'izany ny saina afaka manohitra ny famonoan'ireo olona hafa ara-batana izay atrehin'izy ireo ary tsy maintsy miady amin'ny tanàna lehibe na fivorian'ny olona. .